Xiaomi Redmi6နှင့် Redmi 6A အကြောင်းတစေ့တစောင်း | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Xiaomi Redmi6နှင့် Redmi 6A အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Xiaomi က သိပ်မကြာသေးခင်ကပဲ Xiaomi ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်တဲ့ Mi 8 ကိုမိတ်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Xiaomi Redmi6နဲ့ Redmi 6A စမတ်ဖုန်းများကို ထုတ်လုပ်ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ခုလုံးကတော့ အိန္ဒိယဈေးကွက်မှာ အောင်မြင်မှု အသင့်အတင့်ရထားတဲ့ Redmi နဲ့5Redmi 5A လိုမျိုး အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ ထွက်လာဖို့ အစီစဉ်ရှိပါတယ်။ဥပမာ- Redmi5အကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် 18:9 design ကိုကြီးမားတဲ့ ဘက်ထရီနဲ့ တည်ဆောက်ပုံတွေကလဲ တော်တော်ကောင်းမွန် ပါတယ်။ Note 5A လေးကတော့ Redmi5နဲ့ယှဉ်ရင် အကြမ်းတမ်းပိုခံပါတယ်။
Redmi6နဲ့ 6A လေးကို အသေးစိတ်အချက်အလက်လေးတွေနဲ့ ပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Redmi6လေးကတော့ Redmi 6A ထက်စာရင် RAM ပိုများပြီးတော့ လက်ဗွေစနစ်ပါဝင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Redmi6လေးကတော့ AI နည်းပညာနဲ့ ပူးပေါင်းထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပြီး မျက်နှာနဲ့ ဖွင့်လို့ရမဲ့ စနစ်လဲ ပါဝင်လာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။Redmi 6A ကိုတော့ hardware နဲ့ feature တွေကို ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ တန်အောင်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Redmi6ကတော့ Redmi5နဲ့ယှဉ်ရင် ဘက်ထရီ ပိုနည်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ 3000mAh ပဲပါဝင်တော့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုထူးခြားမှာကတော့ Redmi 6A မှာ MediaTek chipset အသစ် ပါဝင်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Redmi6နဲ့ 6A ကိုဈေးနှုန်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
Xiaomi က Redmi6နဲ့ Redmi 6A ကို တရုတ်ဈေးကွက်မှာ ပထမဆုံး ကြော်ငြာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကို Europe နဲ့ India မှာ နောက်လလောက်မှာ မိတ်ဆက်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေ့ဆိုတာတော့ သေသေချာချာမသိရသေးပါဘူး။ဈေးနှုန်းတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 3/32GB နဲ့ Redmi6ကတော့ $125 လောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး 4/64GB ကတော့ $155 လောက်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Redmi 6A လေးကတော့ $95 လောက်ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ခုပြောထားတဲ့ဈေးတွေကတော့ တရုတ်မှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ဈေးအပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်ပါတယ်။
Xiaomi က သိပျမကွာသေးခငျကပဲ Xiaomi ရဲ့ နောကျဆုံးထှကျဖွဈတဲ့ Mi 8 ကိုမိတျဆကျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ သူနဲ့ သိပျမကွာခငျမှာပဲ Xiaomi Redmi6နဲ့ Redmi 6A စမတျဖုနျးမြားကို ထုတျလုပျဦးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နှဈခုလုံးကတော့ အိန်ဒိယဈေးကှကျမှာ အောငျမွငျမှု အသငျ့အတငျ့ရထားတဲ့ Redmi နဲ့5Redmi 5A လိုမြိုး အောငျအောငျမွငျမွငျနဲ့ ထှကျလာဖို့ အစီစဉျရှိပါတယျ။
ဥပမာ- Redmi5အကွောငျးကိုပွောရမယျဆိုရငျ 18:9 design ကိုကွီးမားတဲ့ ဘကျထရီနဲ့ တညျဆောကျပုံတှကေလဲ တျောတျောကောငျးမှနျ ပါတယျ။ Note 5A လေးကတော့ Redmi5နဲ့ယှဉျရငျ အကွမျးတမျးပိုခံပါတယျ။
Redmi6နဲ့ 6A လေးကို အသေးစိတျအခကျြအလကျလေးတှနေဲ့ ပါဝငျတဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
• 5.45-inch 18:9 HD+ (720×1440) LCD display
• 3GB or 4GB RAM
• 32GB or 64GB expandable storage
• Dual 12MP + 5MP back camera
• Extras: Bluetooth 4.2, MicroUSB, 3.5mm audio jack, Fingerprint scanner, OTG, etc.
• Helio A22 processor
• 16GB of expandable storage
• Extras: Bluetooth 4.2, MicroUSB, 3.5mm audio jack, etc.
Redmi6လေးကတော့ Redmi 6A ထကျစာရငျ RAM ပိုမြားပွီးတော့ လကျဗှစေနဈပါဝငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Redmi6လေးကတော့ AI နညျးပညာနဲ့ ပူးပေါငျးထှကျရှိလာမှာဖွဈပွီး မကျြနှာနဲ့ ဖှငျ့လို့ရမဲ့ စနဈလဲ ပါဝငျလာဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Redmi 6A ကိုတော့ hardware နဲ့ feature တှကေို ပေးရတဲ့ ဈေးနှုနျးနဲ့ တနျအောငျထုတျလုပျထားတာဖွဈပါတယျ။
Redmi6ကတော့ Redmi5နဲ့ယှဉျရငျ ဘကျထရီ ပိုနညျးသှားတာဖွဈပါတယျ။ 3000mAh ပဲပါဝငျတော့တာ ဖွဈပါတယျ။ တဈခုထူးခွားမှာကတော့ Redmi 6A မှာ MediaTek chipset အသဈ ပါဝငျလာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Redmi6နဲ့ 6A ကိုဈေးနှုနျးယှဉျကွညျ့ခွငျး
Xiaomi က Redmi6နဲ့ Redmi 6A ကို တရုတျဈေးကှကျမှာ ပထမဆုံး ကွျောငွာမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ကို Europe နဲ့ India မှာ နောကျလလောကျမှာ မိတျဆကျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘယျနဆေို့တာတော့ သသေခြောခြာမသိရသေးပါဘူး။
ဈေးနှုနျးတှကေို ကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ 3/32GB နဲ့ Redmi6ကတော့ $125 လောကျရှိမှာဖွဈပွီး 4/64GB ကတော့ $155 လောကျကမြှာ ဖွဈပါတယျ။
Redmi 6A လေးကတော့ $95 လောကျခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ခုပွောထားတဲ့ဈေးတှကေတော့ တရုတျမှာ ဖွဈပွီး တဈခွားနိုငျငံတှအေတှကျဆိုရငျတော့ ဈေးအပွောငျးအလဲ ရှိနိုငျပါတယျ။
Previous articleOnePlus6ကို တစ်လအတွင်း အလုံးရေ ၁ သန်းကျော် ရောင်းချနိုင်ခဲ့
Next articleAsus က AR နဲ့ VR အထူးပြု ZenFone Ares ကို မိတ်ဆက်